အာယသ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အာယသ် ဆိုသည်မှာအဘိဓာန်တွင်အမှတ်အသားလက္ခဏာဟုဖော်ပြထားသည်။ အစ်္စသေလာဟ် ခေါ်အသုံးအ နှုန်းတွင် ကုရ်အာန်၏ မုက္ခပါဌ်တော်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုခေါ်ဆိုသည်။ ၎င်း အာယသ် တော်များကိုစာကြောင်းစာ ပုဒ်များအနေနှင့်စုစည်းထားပြီး စူရာ တစ်ပုဒ်အဖြစ်ရေးသားထားသည် ၊စူရာ တိုင်းတွင် အာယသ် အရေအတွက် ကိုသတ်မှတ်ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
အာယသ် တစ်ခုတွင် အက္ခရာအချို့ (သို့) ဝေါဟာရအချို့ (သို့) စာကြောင်းအချို့ (သို့) စာပုဒ်အချို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထားသည်။ အချို့မွတ်စလင်မ် များကဤသို့သတ်မှတ်ထားခြင်းသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ) မှသတ်မှတ်ခဲ့သည် ဟုယုံကြည်ထားကြသည်။
ဘဟာအွတ်ဒီးန်ခွရ်ရမ်ရှာဟီး ကတင်ပြသည်မှာ အာယသ်များ၏အစီအစဉ်သည် တစ်ကြိမ်တည်းတစ်ပြိုင်တည်း ကျရောက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျရောက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ သောင်ကီဖှီးဖြစ်သည် ၊ ဆိုလိုသည်မှာအရှေ့ အနောက်အစီအစဉ်တစ်ကျနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလ္လာဟ် ၏အမိန့် ဂျိဘ်ရအီလ် ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့သောနေရာများတွင် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) သည် အာယသ်တော်များကို မည်သည့် စူရာ မည် သည့် အာယသ် အကြားတွင်ပြောင်း၍ထည့်ပါဟု မိန့်ဆိုခြင်းသည်လည်း အရှင်မြတ်၏ ဝဟီ ညွှန်ကြားချက်အ တိုင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။
၁ ကုရ်အာန် အာယသ်တော်၏အရေအတွက်
၂ اقسام آیات
၄ အာယသ် ၏အရှည်အတို နှင့် အရှေ့နောက်အစီအစဉ်
၅ ကုရ်အာန် ၏ကျော်ကြားသည့်အချို့သော အာယသ်များ
အာယသ်တော်များ၏အရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အစ္စလာမ့် ခေတ်ဦးကာလမှာပင်ကွဲပြားမှုများရှိခဲ့သည်။ မဒီနာ မှကာရီ များသည် ၆၂၁၄ ဟုဖော်ပြကြသည် ၊ မကာ မှ ကာရီ များသည် ၆၂၁၉ ဟုတင်ပြကြသည် ၊ ရှာမ် မှ ကာရီ များသည် ၆၂၂၅ ၊ ဘဆွရာ မှ ကာရီ များသည် ၆၀၂၄ ၊ ကူဖှာ မှ ကာရီ များသည် ၆၂၃၆ ဟုအသီးသီး တင်ပြထားကြသည်။ ကုရ်အာန် ၏ အာယသ်တော်များကိုရေတွက်ရာ၌ ကွဲပြားရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သည် ကုရ်အာန် ကိုလူသားတို့အားရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ အာယသ် တစ်ခု ၏အဆုံးတွင် ဖတ်ရွတ်မှုကို ဝပ်က် (ဖှ) - ရပ်နားခြင်း - လုပ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံ အကြောင်းအရာ၏ဆက်စပ်မှုအရ ဝပ်က်(ဖှ) မလုပ်ဘဲဆက်ဖတ်သွားခြင်းမျိုးလည်းရှိသည်။ သို့ပါ၍အချို့သူများသည်ဆက်တိုက်ဖတ်ရွတ်သွားခြင်း ကို အာယသ် တစ်ခုတည်းဟုထင်မှတ်ကြသည် ၊ အချို့ကလည်းထိုသို့မထင်မှတ်ကြပေ ၊ ထို့အတွက်ကြောင့်အ ရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေဝါယသ် များအမျိုးမျိုးကွဲပြားခဲ့သည်။ ထို့နောက်မည်သည့် ဖှီရ်ကာ မဆို၎င်းတို့၏ အမြင်တွင်တိကျခိုင်လုံသည်ဟုမှတ်ယူရသော ရေဝါယသ် အတိုင်း အာယသ် ၏အရေအတွက်များကိုအတည်ပြု ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ရေဝါယသ် များအမျိုးမျိုးရှိနေခြင်းအပေါ်မူတည်ပြီး အာယသ် များ၏အရေအတွက်သည် လည်း မကီ ၊ မဒနီ ၊ ကူဖှီ ၊ ဘဆွရီ ၊ ရှာမ်မီ ၌ကွဲပြားလျက် ရှိနေသည်။
အာယသ် အမျိုးအစားများ ~ ကုရ်အာန် ၏အာယသ် များသည်အကြောင်းအရာနှင့် ဆက်နွယ်မှုများအရ …. မကီ ၊ မဒနီ ၊ နာစိခ် ၊ မန်စူခ် ၊ မို့ဟ်ကမ် ၊ မိုသရှာဗေ့ဟ် ၊ ခါးစ် ၊ အားမ် ၊ ဇာဟီရ် ၊ ဘာသွင်န် ၊ ဆရီးဟ် ၊ မွတ်ဂျ် မိလ် ….. و و စသည်တို့ဖြစ်သည်။و
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) ၏ အဆွ်ဟားဗ် များအတွက် ကုရ်အာန် ကိုကျက်မှတ်အာဂုံဆောင် ရာတွင်ခက်ခဲမှုများရှိခဲ့သည် ၊ ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ထံမှဆင့်ပြန်ခဲ့ကြသည်မှာ - ကုရ်အာန် ၏ အာယသ် များ သည်မသန်စွမ်းသည့် ကုလားအုတ်ပြေးသည်ထက်ပင်လျင်မြန်စွာ နှလုံးသားများမှပြေးထွက်သွားတတ်သည်။ (ဆဟီဘိုခါရီ ၆- ၅၅၀)
ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) သည် အာယသ် တော်အသစ်တစ်ခုကိုဖတ်ရွတ်တော့မည်ဆိုပါက နုတ်ခမ်းများကိုလှုပ်၍ နေတတ်သည် ၊ နောက်ထပ် အာယသ် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြဆိုသည့်သဘောဖြစ်၏ ၊ ထိုလေးနက်သည့်လုပ်ရပ် ကိုမလုပ်ကြရန်တားမြစ်ထားသည်။ (ဆဟီဘိုခါရီ ၆- ၅၄၆)
မိုဟမ္မဒ် သခင် (ဆွ) သည် အာယသ် များကိုအခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ရွတ်ဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူ၏ တစ်နေ့သောအခါ စူရာ နေစာ ၏အာယသ် များကိုဖတ်ရွတ်သည့်အသံကြားသောအခါ ငိုကြွေးခဲ့လေသည်။ (ဆဟီဘိုခါရီ ၅၇၀)
အာယသ် ၏အရှည်အတို နှင့် အရှေ့နောက်အစီအစဉ်ပြင်ဆင်
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၏အရှည်လျှားဆုံး အာယသ် မှာ «آیة دَین» (စူရာ ဗကရာ - ၂၈၂ ) တွင်ဖြစ်ပြီး အတိုဆုံး အာယသ် မှာ «مدهامَتان» (စူရာ ရဟ်မါန် - ၆၄ ) တွင် ဖြစ်သည်။.
အမှန်ဆုံးနှင့် အများလက်ခံထားသော ပထမဦးဆုံးတမန်တော်မြတ်(ဆွ) အပေါ်ကျရောက်ခဲ့သည့် အာယသ်မှာ စူရာ အလပ်က် ၏ပထမ အာယသ် ၅ ခုဖြစ်သည်။သို့သော်နောက်ဆုံးကျရောက်ခဲ့သည့် အာယသ် နှှင့်ပတ်သက် ပြီး ကွဲပြားမှုများရှိသည်။.
ကုရ်အာန် ၏ကျော်ကြားသည့်အချို့သော အာယသ်များပြင်ဆင်
آیه نور-آیه خمس-آیه تطهیر-آیه حجاب-آیه مباهله-آیه اطاعت-آیه ولایت-آیه تبلیغ-آیه انذار-آیه فطرت-آیه اکمال-آیه خیرالبریه-آیه اخوت-آیه تداین-آیه کرسی-آیه و ان یکاد-آیه قتال-آیه مودت-آیه اولی الامر-آیات قتال
↑ الاتقان فی علوم القرآن، سیوطی، ج 1 ص 231، انتشارات زاهدی و شریف رضی
↑ اصطلاح‌نامه علوم قرآنی.
↑ البرهان فی علوم القرآن.
↑ تاریخ قرآن، معرفت.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာယသ်&oldid=698322" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။